Iko kushandiswa uye kwavepo matambudziko egirazi risingatsve moto mukuvaka mainjiniya / 2
1. iyo mhando uye tsika yekupisa moto girazi kupatsanura Zvinoenderana neGG / T12513-2006 "moto bvunzo nzira yeGirazi-yakavharirwa maComputer", iyo moto-chiratidzo girazi kukamura yakakamurwa kuita yekupisa yekuisa mhando uye isiri-yekupisa yekuisa mhando maererano nemoto kuramba , maererano neiyo publ ...
Iko kushandiswa uye kwavepo matambudziko egirazi risingatsve moto mukuvaka mainjiniya / 1
Nekukurumidza kukura kwehupfumi, zvivakwa, kunyanya zvivakwa zvekutengesa, zvakagadzirirwa kukura uye kukura. Muguta munogara munyori, zvivakwa zvihombe zvishanu zvine zvinopfuura mazana matatu emamirimita akavakwa mukati megore rimwe. Iyo yekudzivirira moto dhizaini yezvivakwa zvakakura kudaro com ...
Masuo uye Windows mabhizinesi anoshandisa chigadzirwa mhando kuhwina musika
Parizvino, vatengi vanovimba nemhando yakadzika kwazvo, kana vachitenga madhoo nemawindows zvigadzirwa zvinogona kunge zvisingatenderi kune zvigadzirwa zvemhando huru, uye dambudziko richagara richiitika nokusaziva. Asi zvichienzaniswa nemusuwo uye hwindo chiratidzo, kuti uwane kuvimba kwevatengi, iri kunyanya kukosha ...
Ndeupi hunhu hwegirazi isina girazi-rinoponesa girazi?
Hunhu hwehomwe inodziya girazi regirazi 1, kupisa kupisa 1) Hollow kupisa kuputira: Hollow girazi-rinoponesa girazi rinotora chimiro chakanakisa cheA + 12 + A, uye nzvimbo gwanza iri. Ongororo yedhata inoratidza kuti kana mukaha wepakati usina girazi uri 12mm, iyo yakazara simba yekuponesa mhedzisiro ndiyo ...
Nei mutswe uchioneka mushure megomba regomba rasanganiswa?
Nekukosha kwesimba rekuchengetedza muzvivakwa zveChina, inodzivirira girazi sechigadzirwa chinoponesa simba zvakanyanya uye zvakajairika mukushandisa kwekuvaka madhoo, Windows uye machira emaketeni. Nekuda kweye yakaderera tekinoroji chikumbaridzo chekuchengetedza girazi kugadzirwa uye yakafara musika tarisiro, iyo ...
Unyanzvi hunyanzvi uye kukura girini zvinobatsira Windows nemasuo mabhizinesi ekuchengetedza share yemusika
Mumakore achangopfuura, hupfumi hwemumba hukapinda munguva inoshanduka, indasitiri yemusuwo nemahwindo inokwira, uye "crossover" uye "shanduko" anova mazwi akakosha emusika. Mukutarisana kwevakawanda vagadziri uye iko kunoshanda kwekuisa kweiyo layman, makwikwi ari parti ...
Chivako chakagadzirwa negirazi rakasimba chinowana sei hupenyu hutsva?
Girazi dhizaini rave kunetswa nematambudziko akati wandei kubvira pakagadzirwa. Chekutanga ndechekuti mhando yegirazi haina kuvimbika, simba racho harina kukwana zvakakwana. Uye girazi rakaputsika rinoburitsa zvidimbu zvakapinza, zviri nyore kukonzera kukuvara; Yechipiri ndeye greenhouse mhedzisiro yegirazi, inozodzosera ...
Maitiro emusika akachinja madhoo uye Windows indasitiri inofanirwa kuchinjika kune shanduko uye kukwidziridzwa kweThe Times
Nekuenderera mberi kuvandudzwa kweThe Times, imba yekupa musika pateni yakave neshanduko dzinovhundutsa pasi. Muchirevo chekushambadzira-padivi kugadzirisa, kugadzirisa iteration, kunatsiridza kushandiswa, musuwo uye hwindasitiri indasitiri iri kusanganawo neshanduko uye kukwidziridzwa. Nzira yekusarudza yavo fut ...
Iyo indasitiri yegirazi inofanirwa kugara kure ne "mutengo wehondo" nehupamhi hwepamusoro uye mutengo wakakwira seyambiro
Mumakore achangopfuura, "epasi-emahara emahara-ese, epamusoro-akarasika" ave mamiriro anonyadzisa kumabhizinesi mazhinji mumunda weChina wekugadzira. "Hondo yemutengo" iko kushandiswa kwenzira yakajairika kwazvo yemakwikwi, indasitiri yegirazi haina kujairika. Izvi zvinoreva kuti zvinogona kuunza b ...
Masuo uye Windows mabhizinesi ekuvhura misika mitsva anofanirwa kufunga nezve mutengo wekuparadzaniswa kwemusika
Parizvino, kuvandudzwa kwemusuwo uye hwindo indasitiri kwave kukura, uye kuvandudzwa kwemusuwo uye hwindo bhizinesi rave kudonha mune pfupi bhodhoro nguva. Suo uye hwindo bhizinesi rinogona sei kuwana mamwe matambudziko mune idzva yekuvandudza munda, uye zvakare inoda kusimbisa ...
Kunyangwe iyo tarisiro yemusika yemasuo akagadziridzwa uye Windows yakanaka, mabhizinesi anofanirwa kupaza nepakati pekuvandudza bhodhoro
Mazuva ano, kushandurwa kwemabhizimusi emusuwo nemahwindo haisiri dambudziko chete, asiwo mukana wekuwedzera kwekuvandudzwa kwemabhizimusi emusuwo nemahwindo uye nekuwedzera kwemusika wevatengesi. Kana iwo musuwo uye hwindo mabhizinesi achida kuita basa rakanaka mune iyo shanduko ...
Kudzivirirwa girazi inova iyo nyowani yakajeka nzvimbo pane yakasimba huni mukomboni musuwo
Kicheni kana chimbuzi rudzi urwu lwenzvimbo idiki, mwenje inzvimbo isina kunaka, kazhinji musarudzo yemasuo inoratidza kusarudza gonhi rakasimba rehuni negirazi, kuitira kuti uve nechokwadi chemwenje yemukati, asiwo inogona kuwedzera kutaridzika kwehuni hwakasimba. musuwo. Asi iri girazi diki zvakare canno ...